Ogaden News Agency (ONA) – Halgan qarni jirsaday ayaad ku abtirsataaye war hakaa hadho – Omar jigjiga
Halgan qarni jirsaday ayaad ku abtirsataaye war hakaa hadho – Omar jigjiga
Tan iyo bilowgii ilbaxnimadii aduunka waxay dhalin yaradu ahaayeen laf dhabarta bulshooyinkooda. Waxaase qiimhii dhalin yarad meesha ka saaray xukuumadaha kali-taliska ah gaar ahaan marka ay ku daahaan xukunka iyagoo xoogaga dhalinyarada u isticmaala sidii aalad aan lahayn mustaqbal, iyadoon la tix galinin rabitaanka dhalinyarada iyo xaquuqdooda midnaba.
Wadamad dimuqraadiga ah dhalinyarada codkooda waa miduu siyasi kasta oo raba inuu ku soo boxo doorashada u baahanyahay ama xisbigii doonaya inuu sii waaro kaasoo u carbiya dhalinyarada la wareega talada xisbigaa. Meesha wadamada digtaatoorka ah ay xoogga dhalinyarada u isticmaalaan in lagu cabudhiyo xoogaga ka soo horjeeda diktaatoorka iyagoo dhalinyarada u adeegsada inay ku fushadaan isbadalada danta u ah maamuladaa diktaatooriga ah.
Waxaa xaga kale isu rogay dhamaadkii sanadkii tagay aduunkii kali-talisyadu ku amar kutaag layn jireen, iyadoo sanadkaa lagu sagootiyay haraati xoog leh oo dib u soo celisay awoodi iyo haybadii dhalinyarada duniada gaar ahaan Carabta oo sida sunaamigii ay xoogagii dhalinyarada u burburiyeen xukuumadihii kali-taliska ahaa.
Isbadalada ay dhalinyarada ka wadaan dunida saddexaad waa mid dan u ah shucuubta oy kaga xoreynayaan xukuumado Kali-talis ah oo horumarkii dalalkaa hagaasiyay isla markaana shucuub faqri iyo xoriyad la’aan ku nool.
Hadaan u soo noqono qadiyadeena dhalinyarada ku midowday ururka dhalinayarada ee OYSU kama madhna dareenkooda duufaanada isbadalka ee adunka dacaladiisa kasocda, waxaayna gaarsiiyeen laamaha ururkooda aduunka oo idil, iyagoo ujeedadoodu tahay in la xoojiyo dadaalka lagaga xoreynayo dalka Ogadenya gumaysiga Itobiya iyo kaligi taliye Zinaawi. Wuxuu ururka dhalinyarda iyo ardaydu si xoogan u abaabulayaan dhalinyrada qawmiyadaha kalee ku jira xayndaabka Itobiya sidii isbadal lamid ah ka ay keeneen dhalinta Tunisya iyo Masar looga hirgalin lahaa Itobiya guud ahaan.
Hawla badan ayuu qabtay ururka dhalinyarada Ogadenya mudadii yareydee uu jiray. Si loo hirgaliyo barnaamijyada ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenia wuxuu fuliyay ururka arimahan soo socda;
Midaynta dhalinyada walaalaha ah ee dunida kukala baahsanaa.
Inuu ka hortago qof dhalin yara ah oo ushaqeeya cadowga.
Inuu ururka dhalinyadu noqdo kaabadii isku xidhi lahayd bulshada Ogadenia laamaheeda kala duwan.
Inuu ururka dhalinyadu u noqdo halganka waran iyo gashaan.
Ururka OYSU iyagoo ka duulaya ahdaaftaa waxay soo dhawaynayaan dhamaan dhalinyarada inay xubin kanoqdaan ururka gaar ahaan dhalinyarada xubnaha ah iyo taageerayaasha qadiyad ogadenia.
Ururka dhalinyradu wuxuu ugu baaqayaa dhalinyarada aaminsan xaqnimada qadiyada xoraynta dalka Ogadenya in ay ku soo biiraan daladda ururka si loo mideeyo dadaalka loogu jiro xoraynta dalka hooyo.
Ugu dambayntii waxaa laga doonayaa qofka dhalinyarada ah inuu ku tijaabiyo awoodiisa wax u qabadka dadkiisa, kana feejignaado in awoodiisa loo isticmaalo burburinta iyo dhibaataynta dadkiisa.
Qormadan lagu cabirayo halkudhiga howsha ururka dhalinyarada oo ah – Halgan qarni jirsaday ayaad ku abtirsataaye war hakaa hadho – wuxuu noqon doonaa qormo joogta ah oo dhalinta loogaga warbixiyo howsha da’yartu wado.
aaada baada umahada santahy waaa fikir saliim ah